बाँकेमा एकै दिन भेटिए कोरोनाका २४ जना बिरामी, संक्रमितको संख्या ८४ जना पुग्यो
विर्तामोड, २२ बैशाख ।
बाँकेको नेपालगञ्जमा हिजो एकै दिन कोरोना भाइरसका २४ जना बिरामी भेटिएका छन् । नेपालगञ्जमा हिजो सुरुमा नौ जना बिरामी भेटिएका थिए । त्यसपछि दोस्रो पटक ६ जना र तेस्रो पटक ९ जना गरेर २४ जना संक्रमित भेटिएका हुन् ।
भेरी अस्पतालको ल्याबमा गरिएको परीक्षणबाट थप नौ जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले नियमित प्रेस ब्रिफिङमा ९ जनालाई कोरोना भएको पुष्टि गरेका गर्नु भएको थियो । त्यसपछि सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले थप ६ जनामा कोरोना देखिएको पुष्टि विज्ञप्तिमार्फत गर्नु भएको थियो ।
यसअघि भेरी अस्पतालस्थित ल्याबमा गरिएको परीक्षणमा शुक्रबार एक जना ६० वर्षीय मुस्लिम धर्मगुरुलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । यी संक्रमतिहरु नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. ८ मा पर्ने जुलाहनपूर्वा टोल आसपासका रहेको बताइएको छ । यी सबै संक्रमित शुक्रबार पोजेटिभ देखिएका धर्मगुरुसँग सम्पर्कमा आएकाहरु हुन् ।
योसँगै नेपालगञ्जमा संक्रमितको संख्या २५ जना पुगेको छ । भेरी अस्पतालको ल्याबमा गरिएको परीक्षणबाट उनीहरुमा कोरोना पुष्टि भएको हो । पछिल्लो पटक भेटिएका नौ संक्रमितको विस्तृत विवरण खुलाइएको छैन । सङ्क्रमितका परिवार र नजिकका आफन्तलाई महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसस्थित क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो । कोरोना पुष्टि भएपछि उनीहरुलाई खजुरास्थित कोरोना विशेष अस्पतालको आइसोलेसनमा लगिने भएको छ ।
बाँकेमा मात्रै कोरोना संक्रमितको संख्या २५ पुगेको छ । आइतवार वीरगञ्जमा पनि एक जना संक्रमित भेटिएका छन् । योसँगै देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या ८४ जना पुगेको छ । ०००००